Archive du 20200110
FFKM niarahaba ny filoha Mivady Fampandrosona araka ny sitrapon’Andriamanitra no tanjona
Tonga niarahaba sy nitafa tamin'ny filoha Andry Rajoelina mivady ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy avy eo anivon'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM omaly alakamisy 9 janoary 2020,
Ahiahina fanodinkodinam-bola Tsy hiasa 48 ora ny mpampianatra
Nivondrona ny mpampianatra ao amin’ny LMA, Jules Ferry, Talatamaty ary ny avy eny Nanisana omaly nanao fanambarana niraisana.
Na ny fotoana hanofisana aza ankehitriny dia tazana ho tsy hananan’ny ankamaroan’ny Malagasy izay mitrongy vao homana intsony.
Tetikasa Fihariana Miara-miasa akaiky amin’ny minisiteran’ny indostria sy fambolena
Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa roa sosona no notanterahana omaly teo anivon'ny programa nasionaly Fihariana. Anisan’izany ny niarahana tamin’ny minisiteran'ny fambolena,
Fandraharahana amin’ny fambolena Maro ny olana tsy mahatafavoaka an’i Madagasikara
Manome 40% amin’ny harinkarena faobe (PIB) ny sehatra Fambolena-fiompiana ary jono izay hiainan’ny 80%-n’ny Malagasy.
Tahan’ny fahantrana eto Madagasikara Misanda 2 tapitrisa dolara ny fanadihadiana
Hanomboka amin’io herinandro ho avy io ny fanadihadiana hotanterahin’ny Ivontoeram-pirenena momba ny antontan’isa na ny Instat mahakasika ny fahantrana eto Madagasikara.
Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena Namaly ilay resaka 65.000 Ar ny minisitra
Taorian’ny fitokonana lavareny nataon’ny mpampianatra dia nivoaka tamin’ny fahanginany omaly Rtoa Volahaingo Marie Thérèse,
Olan’ny Panier Garni Ampahafantaro mazava ny vokatry ny fanadihadiana, hoy ny PASEM
Ny PASEM na ny fiaraha-mientan’ny fikambanana sy sendikan’ny fanabeazana eto Madagasikara izay ivondronan’ny fikambanana sy
Antananarivo Renivohitra Dibo-drano satria tsy voahaja ny drafi-panajariana ny tany
Efa mazava ny resaka fa antony 3 lehibe no mahatonga an’Antananarivo dibo-drano amina rotsak’orana tapak’andro.
Fanadiovana lakandrano Hanomboka anio ny asa
Taorian’i Mahajanga izay vao avy lasibatry ny oram-be farany teo ka nisedra fahasimbana fotodrafitrasa maro samihafa dia izao niaina izany ny eto an-drenivohitra.
Mangarivotra Itaosy Mbola tsy hita izy telo mianadahy
Zaza telo mianadahy iray tampo dia Randrianjatovo Elysé, 11 taona, Nambinintsoa Luc Fiderana, 8 taona ary Raharimalala Lovasoa
Tanjombato Nahitana fatin-dehilahy nihohoka tao anaty rano
Nahitana fatin-dehilahy nihohoka tao anaty rano tetsy amin’ny barazin’i Tanjombato, omaly maraina tokony ho tamin’ny 09 ora.
Vato nogiazana eny Ampandrianomby Miala bala ny minisitry ny harena ankibon’ny tany
Mijaly ny ankamaroan’ireo mpandraharaha Malagasy. Fantatra mantsy izao fa misy teratany vahiny mikasa hividy ilay kariera ao
Besarety Handray andraikitra amin’ny fanadiovana ny fokontany
Saika dibo-drano avokoa ny ankamaron’ny toerana na faritra iva na avo.
Fisolokiana DAB Banky sy telma Tratra ilay nikasa hangalatra amin’ny alalan’ny “code temporaire”
Natolotra ny fampanoavana omaly alakamisy ny raharahan’ny lehilahy iray izay voasambotry ny polisin’i 67ha, ny alarobia 8 janoary teo teny amin’ny faritry ny Havana 67ha noho ny antony fisolokiana vola amin’ny alalan’ny DAB.
Minisiteran’ny serasera Politikan’ny fitsitsiana ny fanesorana mpiasa
Namaly bontana ny resaka momba ny fihorohoron’ny mpiasa ny fanesorana ny minisiteran’ny serasera.